Side Loo Abuuraa Ganacsi Guulaysan kara? – Minds issue|Future Skills
Waa maxay qorshe ganacsi?
Sidee loo abuuraa qorshe ganacsi?
Maxaa lagaga baahanyahy inad ogaatid inta aad bilaabin hawlgalka ganacsiga?
Ganacsi kasta wuxu ku taaganyahay Tiirar ama Qorshe kaas oo xooga lagu saaro sidi lagu abuuri lahaa looogana dhigi laha gancsigaada mid guulaysta.
Markad abuuraysid ganacsi guulaysta waxa muhuum ah inaad ka fikrtid Qorshahaaga adigoo xooga saarayo waxa uu kaga baahanyahy ganacsigaada wana inaad ka fikirtaa macamiilkada baahidiisa ugu wayn ee uu qabo wayo ganacsiga wuxuu u taaganyahay xalinta dhibaatada( problem solving) macamiilka adigana waxaad tahay qofkii xalin Lahaa dhibkaas adigoo so sarayo wax qiimo leh hadey tahay badeeco(Goods) ama Adeeg(servics)
Wadadaan ayeeynu kala saari doona si aad ooga heshid fikir buuxa oo ah sidii ad ku abuuri laheed ganacsi guulaysta intaa aadan bilaabin qorshahaaga gancsi.
Noocyada ganasiyada yar yar sida dukaamaha iyo meelaha yar yar ee ganacsiga laga bilaabo waxa macquul ah inuu ruuxa uusan xoog badan saarin waayo wuxu isleeyahay Dadki ka horeeyay sideey sameyaan samee taasna wa mida keeenta inaad qorshe la aan aad gaancsi bilowdid.
Qorshahaaga ganacsiga wuxu muhiim u yahay jiritaanka iyo asaaska ganacsigaada adigoo mar walbo dib ugu labanaayo tilaabooyinkaad horay u qortay wa hadii uu socon waayo ganacsigaada ama Aaad dareentid caqabad xaga kala socodka taasna waxa masuul ka ah qorshahaaga ganacsi ee aad qoratay waqtigii ad kusoo biirtay ganacsigaan,balse Hadii uusan wax qorshe kuu qorneen waxad tahay ruux meesha uu usocdo aan aqoon ugu danbayna waad ku qsaari ganacsigaas.
Qorshagaaga gaancsi ma ahan mid loo bahanyahay inuu waqti kugu qaato oo kaa hor istaago inaad ficil u badasho waxa aad maskaxda aad ku hayso balse waa mid kusinaayo tilaabadii ad qaadi laheed. Markaad qoraysid qorshahaaga ganacsi wa inaad cadeysaa arimhaan soo socdo,
Nooca gaancsi ood anuuri laheed tusale dhisme,xawilaad,dukaan,meel cunto,hotel laseexo.?
Qiimeen samee qarash ahaan waxa kaga bixi karo.?
Muxu ganacsigadan gaar ku yahay oo macamiilka ku doorankara si aad oga badbaadid Tartanka suuqa.?
Xageed ka keeni rabta alabahaas ama ma haysta shirkadi ka tageeri laheed alabahas si aad oga soo gadatid waqti walbo.?
Dhaqaale ahaan meqaad u baahantahy?
Shaqaale ahaan imisa u baahantahy.?
Qimee xaalda dhqale ee macamiilka ama bulshada ineey awodaan iibsashada alabahaaga?
Goobti aad ka furi laheed?
Yuu noqonayaa macamiilkaga tusale dhar hadad iibinaysid macamilkada saxda wa haweenka iyo caruurta?
Amni ahaan wa sidee goobta?
Xirfad ama xibrad intee la eg ayad u leedahay hawshaan?
Haduu ganacsigaan socon waayo xeelad see ah ayad isticmaali rabta si aad oga baxdo ganacsigaan oo midkaleaad u qorsheyso adigoon qasaaro galin?
Dhamaan intaan wa ineey ku cad yihiin oo ka dhabaysa jawaabah suaal kasta waayo waa ganacsigaadi fadlan isku day inaad jawaab u heshid waayo hadey wax ka qaldnyihiin Waxeey saaameyn kugu yelanayaan markaad gaancsiga gudaha u gashid ileen maadan cadeen qorshahaagee.
Baahida dhabta ah ee loo qabo fursada adiga aad ka faideesan rabto
Waa inaad ogataa baahida dhabta ah ee ka jirta suuqa aad u hanqal tageyso waayo waxa ku cadanaayo waxa hada suuqa yaalobadeeco ahaan ama adeega haan ee ay bixiyaan shirkadha kaso horeeyay adigana aad darasad ahaan inta u sameysid aad cilmi buuxa ka qadatid si hadii wax laga badalaayo aad wax ka badashid hadii waxlagu soo kordhinaayana aad kusoo kordhisid taasna waamidi horey aan ooga hadalnay ee qorshaha marki la qoraayo in lagu daro ee aheed inaad ogatid baahida bulshada.
Sixirka badecooyinka aad soo galin rabto iyo midka ay jogaan,
Sixirka badecooyinka aya lagu tartamaa o hadii aad heli kartid badeeco midii hore lamid ah balse qiimo ahaan ka jaban waxad haysata fursad aad isku barto bulshada suuqa,
Isbadalka ku imaan karo suqaan aad gali rabto,
Waa inuu kuu cadyahay hadii uu imaad isbadal dhqaale oo badecooyinki suuq belaanmadama dhaqaalaha bulshada hoos udhacay wa inaad leedahy qorshe aad kusii socon Karo oo kusii hago sii aad oola qabsato isbadalada kale ee soo socdo waayo dhaqaalaha wuu isbadala waqti walbo adigana waxad ku qasbantahay innad lasocoto Xaaladaha iyo wacyiga kajiro Bulshada dhaxdeeda
Ma haysa qarash dheraad hadii loo bahdo si shirkadada ay u sii socoto.
Shirkada xili ayey maraan oo logu yeero xiliga soo amaahshada(Borrowing stage) oo ah waqtiga shirkada ay ubaahantahy ineey hanti dheraad heshosii ay usii jirto.
Xiligaan waa inaad hesha garab ama meel aad wax kasoo amaahan karto si aadaad usii kala wado dhaq dhaqaaqa Ganacsiga hadii kale waaxd noqonaysa ruux suuqa ka baxay kunafashilmay qorshihiisi.
Gancsiga guukaysta sidaloo abuuro waxa loomara wadooyin taasooasaas uah qorshaha gaancsiga ee lagu taa gala in la raacosii wax walbooosoosocdo looga sii baraan dago Waxaana ka mid ah in aad cadeysid qorshahaaga gaancsi iyo wadadii ad mari laheed si aad suqa aad usoo gasho.
Dhamaan kor ayan kusoo xusay waxeyna asaas uyihiin inaad ka dhabayso fikirkaaga ganacsi waliba waxeey kuu sahlayaan inaad noqoto mid aan ku fashilmin.
Muhiimada suuqa waa inaad ogaata macamiilkaaga iyogoobta aad ka furilaheed adigaa maskaxda ku haayo hanti intee le eg ayaad galn rabta gaancsigaan waxaana mesha aan ka marneen
Xiradafa iyo qibrada aad u leedahy gaancsigaan midaasna waxaaad ku kala sari karta ganacsiyada ka horeeyay maxey bulshada siinin adeeg ahaan ama badeeco ahaan adigoo ka faideesanayo
Fursadaas waxadnanoqon karta ruux shirkadiisa wax ay kusookordhisay baahina dabooshay.
Tags:ganacsi cusubganacsi fududqorshe gancsisidee loga shaqeesta internetka
previousMaxa Keena Walwalka Badan?